USolwazi Kathleen Pithouse-Morgan (wase-School of Education), no-Dkt Mvuselelo Ngcoya (wase-School of Built Environment & Development Studies), bathole indondo ehlonishwayo i-Distinguished Teachers’ Award; kwathi uSolwazi Ruth Hoskins (wase-School of Social Sciences) noDkt Miranda Young-Jahangeer (wase-School of Arts) bahlonishwa ngezitifiketi zokuba othisha abavelele, phecelezi i-Certificates of Excellence in Teaching.
Izitshudeni eziningi zikaPithouse-Morgan ngothisha abafundisayo abaqhamuka ezindaweni ezehlukene, abafundisa izifundo ezihlukene ezikoleni nasezikhungweni zemfundo ephakeme. Indlela afundisa ngayo yeyeme endleleni acwaninga ngayo emkhakheni wemfundo nendlela afundisa ngayo.
Uchaze wathi: ‘Endleleni engifundisa ngayo ngikhuthaza ukuthi abantu bazibuze imibuzo besebenzisa izindlela ezigxile ebucikweni nokubamba iqhaza njengokudweba, ukubhala izincwadi, ukudweba ngokomqondo nezikhangiso zeshashalazi nezethelevishini. Ezifundweni kubalwa izinsiza eziningi njengezinkulumo kwi-internet, imibhalo yemibono kwi-internet, izindaba zamaphephabhuku nezamaphephandaba kwi-internet. Ukusebenzisa izindlela nezinsiza ezihlukene kwandisa izinga lokuninga ngezinto, ukujula ngemicabango, ukuxhumana ngengxoxo nokwabelana nokukhula, ukwenza izinto nokukhula ngokwemizwa.’
KuNgcoya into enzima kakhulu ukuba nesibindi nokudedela izitshudeni zizimele. ‘Isimo somhlaba nezinkinga okumele abafundi nabafundisi bazixazulule kudinga ukujula ngomcabango nokwenza izinto ngendlela ephambene nejwayelekile yokuhlola izinto. Ngakho-ke, ngikhuthaza abafundi ukuthi basebenzise zonke izindlela ezikhona. Kungaba okuqoshiwe, imibiko, ama-eseyi, ama-eseyi anezithombe, izethulo nezinkondlo; noma yini ezwana nabo. Ekilasini, ngiye ngizame ukwenza izibonelo ngempilo yabo. Ngikholwa wukuthi bazizwa behlomula uma kwenzeka kanjalo. Akusiwo umsebenzi olula kodwa nginenhlanhla yokuthi ngifundisa abafundi abenza iziqu eziphezulu, namakilasi ami anesibalo esikahle, okwenza ukuthi ngikwazi ukuzama ezinye izindlela zokufundisa.’
Ibamba leDini yezokuFunda nokuFundisa eKolishi, uHoskins, likholwa ukuthi kumqoka ukulandela izindlela zobuholi ezivumela ushintsho kwezokufunda nokufundisa e-UKZN, ngakho-ke, umuntu onjengaye kufanele abe yisibonelo.
‘Ukuba wumuntu ojulayo ngokucabanga kusho ukuthi kufanele ngihlale ngilandela izindlela ezintsha zokwenza izinto emkhakheni engikuwo nolwazi lokufundisa nokufundisa. Ukulandela izindlela ezintsha zokufundisa nokuhlola yindlela engikade ngayilandela nendlela yokufundisa eqinisekisa ukuthi abafundi basesimweni sokubamba iqhaza emphakathini nasemsebenzini uma sebethweswe iziqu,’ kusho yena.
UDkt Young-Jahangeer, onguMholi Kwezokufunda NokuFundisa, ubeka eqhulwini indlela yokufunda egxile ebucikweni bemvelo. Ukholwa wukuthi izindlela zokwenza izinto nezokulanda izindaba zixhumene nokwenzeka emkhakheni wemfundo ephakeme, kanti ingakhuthaza ihlomise abafundi ukuthi bazazi, bashintshe izinto okuyinto edingeka emphakathini.
Izifundiswa zithi imiklomelo enje imqoka ngoba ihlonipha iqhaza lezifundiswa ngasinye ekubhekaneni nezinselelo nokuphucula imizamo yokufunda nokufundisa enyuvesi kube kukhuthazwa izindlela zokufundisa ezikhuthaza izindlela ezintsha zokufundisa, ezigxile ekutheni ukufundisa nokucwaninga kuhambisana kanjani.
Isithombe: Sithunyelwe yi-ArrowSA